Fandinihana tena, tany, teny… izao | NewsMada
Amin’izao ankatoky ny fankalazana ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izao, na efa naman’ny ao anatin’izany: tsy mampitovy hevitra sy fijery ny sasany etsy sy eroa ny amin’ny tokony hananganan-tsaina na tsia. Nahoana? Lasa adihevitra politika ho azy amin’izao ny raharaha: tsy hita izay anehoana ny likilikim-po, sanatria? Na amoahana ny tsy fahazakana ny zava-mitranga sy izay iainana ary atao…
Ratsy sy tsy mety amin’ny tena izay iainana? Vao mainka haratsiana sy potehina amin’ny tsy fahatsiarovan-tena amin’ny fiheverana sy ny fanomezan-kasina ny firenena… Hanovana inona amin’izany ny tsy fananganan-tsaina? Na efa ifanondroan’ny hafa molotra aza, na hitan’ny havany eo… Tsy ny fitiavan-tanindrazana sy ny hasarotam-piaro ny amin’ny maha firenena ny firenena aza ve no tokony hananganan-tsaina?
Toy ny mpivady miady tsy mahavita mifamono mivantana izany: ny fitaovana ao an-trano no anazerana ny alahelo sy anamparan-kery. Fahasimban-javatra no vokany, fahapotehana. Avy eo, hanarina sy hanonitra ny rava ihany rehefa tsy mandeha amin’ny fisarahana tanteraka. Amin’ity hoe tsy fananganan-tsaina, ny tanindrazana iombonana tokony hampiombona no tsy ifankahazoana sy ndeha hampiady an-toerana?
Sao tsy fitiavan-tanindrazana intsony ny manetsika sy manesika fa fitiavan-tena? Fotoana fandinihan-tena izao hoe fahatsiarovana ny fiverenan’ny Fahaleovantenam-pirenena izao; fandinihana ny tany mila ihavanana sy mampihavana fa iaraha-miaina; fandinihana ny teny atao ihany koa fa misy teny tsy tsaroana amin’izay firain’ny vava: mbola mila henoina sy inoana? Misy lolompo, fandranitana, fihantsiana…
Misy mahita fa maizina aminy avokoa ny zava-drehetra, na ny tany aman-danitra aza: tsy misy na inona na inona, hono; tsy ahita-mangirana amin’izay atao. Izany no tsy ananganan-tsaina? Mila ampiasaina ny saina raha mbola mahatsiaro tena, manana firenena isiana sy iainana… Ahoana ny tena amin’ny teny atao eto amin’ny tanin’ny tena?